पाल्पामा–यिनीहरु छन जसले मानवता छ भन्ने देखाएका छन – E Kutumba
यो बेलामा नेता खोजिनु अस्वभाविक हैन । नेता चुनाव जितेका मात्रै हैनन्, हुंदैनन । जसले नेत्रित्व गर्छु भनेर अघि सरेका छन, सरेका थिय, फल्नाले के गरेको छ भनीरहेका छन ,उनिहरुले के गरे ? कुनै औपचारिक कार्यक्रममा पोर्टफोलियो तलमाथि हुँदा हल्लाखोर गर्ने नेता कहा छन ? जिल्लाका नेता कस्ले कति गरे त्यो जनताले पत्याउने कुरा हो । फोन, फेसबुकका फोेटा र फाइलिङको कामले अहिले भोको पेट र लखतरान परेको जिउमा कुनै प्रभाव पर्दैन ।
लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछी दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जिविको पार्जन गर्नेहरु पैदलनै भएपनि गन्तव्यमा जान छाडेका छैनन् । पाल्पा हुँदै जानेहरु पनी दैनीक ५० बढि छन । तत्काल मान्छेले सास बचाउने कुरा ठुलो हो ।
तर यिनीहरु छन जसले मानवता छ भन्ने देखाउछन
तानसेन नगरपालिकाको वडा नं. ८ डुम्रेका केही स्थानीयहरुले लकडाउनको वेवास्तै गरेर भएपनि पैदल यात्रीको सेवामा जुटेका छन । महिला तथा वालवालिकाहरुसमेत कैयौ दिन राजमार्गमा खुट्टा खियाउदै हिडेको दुःख देख्न नसकेर स्थानीय जित बहादुर सिलवालले आफ्नो नेत्रित्वमा पैसा संकलन गरेर पानी, चाउचाउ, भुजा र विस्कुट बितरण गरेका छन ।
दिनहुँ हिडिरहेको देखेपछी आइतबार बाट राजमार्गमै स्थानीयले पैदलयात्रीलाई निशुल्क खानेकुरा वितरण गर्दै आएका हुन । हिँडनु हुन्छ हुदैन भन्ने हामिले वास्ता गर्ने कुरा भएन, मेरो घरको झ्यालबाट नसकी नसकी खान नपाइ हिडेको देखेपछी कसरी मनले मान्छ र ? स्थानीय दिपक कार्कीले भने, मन्दिरमा पनि दान गर्ने बानि थियो त्यो भन्दा ७ दिन देखि पानिको भरमा हिडेका भोका मजदुरलाइ खुवाउदा आनन्द भयो । स्थानियले नै पैसा उठाएर प्रहरी संगको समन्वयमा कतिपय मजदुरलाइ गाडी व्यवस्था गरेर पनि घर पठाएका उनले बताए । उनिहरुले बुधवार देखि देखी राजमार्गमा हिडेका ३ सय जना पैदल यात्रीलाई पानी र खाजा खुवाएको स्थानीय सँग रेकर्ड छ ।
सोमबार देखी हिडेर शुक्रवार दिउसो तानसेन ८ डुम्रे आएका सुर्खेतका ३६ जना मजदुरलाइ स्थानीय प्रहरी संग समन्वय गरि स्थानीयले पैसा संकलन गरेर गाडीको ब्यावस्था गरि पठाएका छन् । पोखरामा घर बनाउने, सामान लोड अनलोड गर्ने मजदुरलाइ यसरी ट्रकको ब्याबस्था गरेर पठाइएको हो ।
पैदल यात्रीको, ब्यावसायी सुदिप कार्की, भक्त बुचा लगायतका दर्जन बढीले खाद्यान्न, पानी तथा चन्दा संकलन गरि पैदल यात्रीको उद्यार गरिरहेका छन् । राजमार्गमा पैदल हिड्ने सवैलाई एक बोत्तल पानी, एउटा चाउचाउ, विस्कुट र भुजा वितरण गरिरहेका छन् ।
नगरपालिकाले बर्दिया जाने ४१ जनालाइ बस खोजेर पठायो
शुक्रवार नै पोखरा बाट ४ दिन देखी हिडेर आएका ४१ जना मजदुरलाइ प्रहरी संगको सहयोगमा तानसेन नगरपालिकाले बसमा पठाएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा बस खोजेर उनिहरुलाइ गन्तब्य सम्म पढाएको हो । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहिले स्वास्थ्य अबस्था पनि हेरेर, सुरक्षीत तरिकाले पढाएको हो । ‘हेर्दा लखतरान थिय, घरमै जाने भने हाम्रो बिवेकले पढाउन ठिक ठान्यो,’ शाहिले भने, ‘प्रहरी संगको सहकार्यमा नगरपालीकाले पैसा दिने गरि पठायौँ ।’
पाल्पा प्रहरीले लमजुङ बाट हिड्दै आएकालाइ बसमा पठायो
लमजुङमा पुलको काम गर्ने १४ मजदुर ४ दिन हिडेर पाल्पा र स्याङजाको सिमा राम्दी आए । बर्दिया घर भएका उनिहरुलाइ पर्वतको कुश्मा बाट कपिलबस्तुको चन्द्रौटा सुजि र आटा लिन जाँदै गरेको ग १ क २९५८ नं को मिनी ट्रकको चालकले बाहिरबाट चाँवि लगायर भित्र बस्ने सर्तमा लान तयार भयो । ४ दिन हिडेका उनिहरु त्यसरी दोभान सम्म जान तयार भय । उनिहरुलाइ स्याङजा तर्फको राम्दिमा रहेका प्रहरीले ट्रकमा राख्ने प्रबन्ध गरेका थिय ।
ट्रक चालकले मानिस ओसारेको खवर पाएको सुइको पाएपछी सिद्दार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन को लामिडाडामा सडक छेउमै ओराल्यो र भाग्यो ।
दोभान सम्म जाने र त्याँहा पुगेपछी बिकल्प होला भनेर ट्रकमा बसेका उनिहरु संग न एक सुका पैसा थियो न खाने कुरा । प्रहरीले अलपत्र परेका उनिहरुलाइ स्थानिय संग पानि र बिस्कुट मागेर खुवायो र एसपी दिपेन्द्र जिसीको निर्देशनमा घर पठाइयो ।
तानसेनको खानेपानी महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय